Air Austral: Return of the Dreamliner in the colors of the lagoon | Airline News
Air Austral: Fiverenan'ny Dreamliner amin'ny lokon'ny lagoon
Home » Lahatsoratra » Vaovao momba ny fiaramanidina » Air Austral: Fiverenan'ny Dreamliner amin'ny lokon'ny lagoon
"Araka ny nambara omaly, ny Air Austral Boeing 787-8, F-OLRC voasoratra anarana, miverina ao amin'ny fiaramanidin'ny Air Austral ", hoy ny kaompaniam-paritany.
Ny fiaramanidina, ankehitriny manana maotera amin'ny endrika vaovao, dia nandao ny ivon-toerana fikolokoloana Etihad any Abu Dhabi hahatratra ny Nosy Réunion aorian'ny sidina fitsapana. Ny fiaramanidina Air Austral dia niantsona teo amin'ny làlan'ny seranam-piaramanidina Roland Garros any Reunion tamin'ny 4 Novambra 2019 tamin'ny 07:00.
Ny Air Austral Boeing 787-8 dia nanohy ny fandaharam-potoanan'ny sidina araka ny fandaharana tamin'ireto sidina manaraka ireto: UU274 Reunion - Mayotte: Niainga ny sidina tamin'ny 12:00 niaraka tamin'ny fahatongavany tany Dzaoudzi tamin'ny 13:00.
UU275 Mayotte - Réunion dia miainga amin'ny 15:15 ho tonga any Reunion amin'ny 18:25. Ny fiaramanidina koa dia nanao ny sidina voalohany Mayotte-Paris ny talata 5 novambra 2019. Ny fiaingan'ny Dzaoudzi dia kasaina amin'ny 20:30 eo an-toerana fotoana amin'ny fahatongavana ao amin'ny Roissy CDG amin'ny 06:30 maraina maraina.
Miaraka amin'ny fiverenan'ny F-OLRC mahomby amin'ny fiaramanidina, manantena ny orinasa fa "hampiorina maharitra ny programa sidina."